IFixit ityhila ngaphakathi kwii-AirTags | Ndisuka mac
Abasebenzi be-iFixit bagqibe kwelokuba lixesha lokuba babone ngaphakathi kwee-AirTag ezintsha Sele zisezandleni zabasebenzisi emva kokuba ukuthunyelwa kuhanjiselwe phambili kwabanye abathengi. Ngoku kufuneka silinde ubuncinci inyanga ukuze sikwazi ukonwabela oko. Kubonakala ngathi sisixhobo sokuqala, esiqinisekisile abantu kwaye amaxabiso ahlengahlengisiweyo akabacimanga abathengi bayo. Kungenxa yoko le nto iingcali ze-iFixit bafuna ukuba siyibone into esiyithengileyo.
1 I-iFixit ithelekisa ii-AirTags kunye nezinye iimodeli kwintengiso
2 Eyona nto intle malunga nee-AirTag yindlela abasilungiselele ngayo isithethi
I-iFixit ithelekisa ii-AirTags kunye nezinye iimodeli kwintengiso
Phambi kokuba ube nakho ukubona ngaphakathi kwezixhobo ze-Apple ezintsha eziluncedo lokufumana izinto esizilahlekileyo, kulungile ukwenza uthelekiso kunye nabo sele bekhona kwimarike. Ukwenza oku, iFixit Uye wathelekisa iApple neTile kunye neemodeli zeSamsung. Kwaye sifumana ukufana kodwa nokwahluka okulungeleleneyo kokungafuneki, benza umahluko phakathi kwenye nenye.
I-iFixit ithelekisa iiAtagtags zika-Apple kwiTile Mate kunye ne-Samsung galaxy SmartTag. Ngobungakanani, ngokucacileyo Ii-AirTag zinobukhulu obuncinci. Oko kuthetha ukuba indawo yangaphakathi esetyenziselwa ukugcina ibhetri ngokwayo incinci kwaye ke bakwazile ukuyigcina ngokusetyenziswa okungcono. Umahluko ophawuleka kuyilo kukuba akukho mngxunya kwii-Airtag zokuyixhoma nakweyiphi na eyakhelwe-ngaphakathi kwi-fob ephambili. Oku kuthetha ukuba ekugqibeleni kufuneka uthenge isixhobo kwi-Apple okanye kwiqela lesithathu ukuya, umzekelo, ukongeza kwizitshixo, endicinga ukuba zezona ziluncedo kwezi zixhobo.
Irediyograph yezixhobo zintathu zibonisa oko I-Apple ayikhange ichithe indawo yangaphakathi yokulandela into yakho. Kwelinye icala, i-Tile Mate kunye ne-Galaxy SmartTag kubonakala ngathi khange bayisebenzise yonke indawo ekhoyo kwaye "bashiye izikhewu kwindawo yangaphakathi." Ngaphezulu koku, akukho zimbini, kwaye ngaphandle kobukhulu bazo obukhulu, kubandakanya itekhnoloji ye-ultra-broadband enjengeeAirTags. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-Samsung isandula ukukhupha i-Ultra-wideband variant yeGalaxy SmartTag; Nangona kunjalo, iFixit khange ikwazi ukufumana isampulu yokuthelekisa.
I-Tile Mate, i-Galaxy SmartTag kunye ne-AirTags zibonakalisa iibhetri zohlobo lwemali. Ii-AirTags kunye nomthala we-SmartTag zisebenzisa ibhetri .2032Wh CR66, Ngelixa iqabane lomlinganiso lisebenzisa ibhetri encinci .1632Wh CR39. Kuzo zontathu, indlela yokutshintsha ibhetri iyafana kwaye akukho nzima kakhulu ukuvula isixhobo endaweni yoko.
Zonke ezi zixhobo zintathu zivuliwe kusetyenziswa iminwe yakho, Akukho zixhobo zifunekayo! Oko kwathethi, i-AirTag yeyona inzima kakhulu, ngakumbi ukuba uneminwe enamafutha okanye emanzi. Khawufane ucinge xa ​​uvula ingqayi yeetanki enezithupha nje ezibushelelezi, kwaye uyayiqhela. Ezinye iimodeli zinikezele ngezinto zokwahlula iziqwenga ngomnwe. Into elula kwaye esebenzayo.
Eyona nto intle malunga nee-AirTag yindlela abasilungiselele ngayo isithethi
Ii-AirTag zinesithethi esakhelweyo esikhupha izandi nge-iPhone ebhangqiweyo ngokusebenzisa i-App yam. U-Apple kuye kwafuneka acinge ngendlela entsha yokufaka isithethi kwi-tracker ngenxa yendlela encinci ngayo. Inkampani igqibe kwelokuba isebenzise umzimba wonke wefowuni njengomqhubi wezithethi, ezantsi kwekhava esebenza njengemagnethi yesithethi.
Ukhe waqaphela ukuba "iqhosha" lisezantsi kwekhava? Ayililo iqhosha elinokucofa, njengoko i-matte kunye ne-SmartTag yenziwe, kodwa endaweni yoko imagnethi esiyibonileyo ngaphambili kwi-X-ray. ndiyazi ifunyenwe kanye ngaphakathi kwebhodi yelogic emile, Idaleke kwikhoyili yobhedu ukwenza isandisi-lizwi. Oko kukuthi, umzimba we-AirTag ngokuyintloko ungumqhubi wesithethi. Amandla athunyelwa kwikhoyili, ewayisa kumazibuthe, ibangela isiciko seplastikhi esikhusela ibhetri ukwenza izandi ezikhupha xa into elahlekileyo ifike kuthi.
IFixit ithi sKwakunokwenzeka ukubhola umngxuma ngesixhobo ukwenza ukungabikho komngxunya wefob owakhelweyo. Ukwenza njalo kuya kuyiphelisa iwaranti ye-AirTag, kwaye ngelixa kunokwenzeka, ngumngcipheko. Njengoko iFixit isitsho, "ukubhola kwindawo engalunganga kunokubangela umonakalo omkhulu."
Esi sisikhokelo sokuqala sokudiliza. Sijonge phambili kweyesibini apho bathi bazakubandakanya ulwazi oluneenkcukacha malunga nebhodi yesekethe yeAirTags kunye nezinye iimfihlo ezifihliweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » IFixit ityhila ngaphakathi kwii-AirTags
Inketho entsha ye-Hi-Fi kunye ne-XNUMXth Gen AirPods ezizayo kungekudala ngokweRumor